Si aad ugu boodaan gunaanadyada, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Ha xukumin dadka kale, markaa kadib laguuma xukumi doono! Qof ha xukumin, markaa adiga laguuma xukumi doono! Haddii aad diyaar u tahay inaad cafiyadid dadka kale, de markaas waa lagaa cafiyi doonaa ” (Luukos 6:37 rajo dhamaan)
In adeegga kaniisadda carruurta carruurta waxaa la baray oo ku saabsan waxa saxda ah iyo qaladka. Horjoogaha ayaa weydiiyay: "Haddii aan ka qaato nin boorsadiisa lacagtiisa oo dhan jeebkiisa, maxaan ahay?" Tom Tom oo gacantiisa kor u qaaday oo aad u dhoolla caddaynaya ayuu yiri: "Markaas adigu waxaad tahay xaaskiisa!"
Miyaad, aniga oo kale, filaysay "tuug" inuu ka jawaabo? Mararka qaarkood waxaan u baahan nahay macluumaad yar oo dheeri ah ka hor intaanan go'aan gaarin. Maahmaahyadii 18:13 ayaa ka digaya: "Ku alla kii jawaab ka hor intuusan dhageysan xitaa wuxuu muujinayaa doqonnimadiisa, oo naftiisuu nacaa."
Waa inaan la soconaa inaan ognahay xaqiiqooyinka oo dhan iyo inay tahay inay sax ahaadaan. Matayos 18, 16 ayaa sheegta in shay ay xaqiijin karaan laba ama saddex markhaati, sidaa darteed labada dhinacba waa inay hadlaan.
Xitaa haddii aan soo aruurinay xaqiiqooyinka oo dhan, waa inaanu u tixgelin inay tani ka sareyso shaki kasta.
Aynu xasuusano 1 Samuu'eel 16: 7: "Nin wuxuu arkayaa waxa indhihiisa hortooda ku jira, laakiinse Rabbigaa fiirsada qalbiga." Waa inaan sidoo kale ka fikirnaa Matayos 7: 2: "... xukunka aad ku xukuntid, waad xukumi doontaa la xukumo ... "
Xitaa xaqiiqadu waxay horseedi kartaa gunaanad khaldan. Xaaladaha had iyo jeer maahan waxa aan markii hore ku qiyaasnay, sida sheekada yar ay na tustay bilowga. Haddii aan u boodno gunaanadka, si fudud ayaan u ceebeyneynaa oo waxaan u horseedi karnaa caddaalad darro iyo waxyeelo dadka kale
Ducada: Na caawi inaanan ku boodin gunaanadka, Aabaha jannada, laakiin inaan sameyno go'aanno sax ah oo sax ah, naxariis u yeelo oo aanan dooneynin inaan ka sii gudubno shaki kasta, Aamiin.
waxaa qoray Nancy Silsox, England